Time Perfect The Year of inay Samee 10 Iibsasho Big [MENTALFLOSS] - Rule News
Time Perfect The Year of inay Samee 10 Iibsasho Big [MENTALFLOSS]
Sidaas aad ugu dambeyntii kor u badbaadiyey lacag ku filan in la sameeyo mid ka mid ah gadashada ugu weyn ee sannadka (ama toban sano)-now aad leedahay si aad walwalo oo dhan waa macaamil ganacsi dhabta ah.
Iyada oo qof kasta oo aan leeyahay raaxo ee sugaya agagaarka daqiiqad ugu fiican si ay u iibsadaan, kuwa yar oo dheeraad ah dabacsan waa in ay ka faa'iidaystaan ​​ka dhigi kartaa farqiga weyn marka la eego lacagta kaydka u-sugi dhawr bilood.
Iyadoo taas maskaxda, halkan waa jeer ugu fiican inay miiska soo saaraan, waayo, 10 iibsadaan.
Read Qodobka Full
← Sidee Haweenay samee karaa More on Arbacada ah? Iska dhigaa inuu noqon Man a Samsung Galaxy S7 iyo S7 Edge casriga taraq →